Homeसमाचारकिशोरले ग’र्भवती बनायो भन्न लाज ला’गेन ? मन मिले माया कुरानमिले पछी यस्तो बे’इजत गर्ने ? (भिडियो सहित)
April 17, 2021 admin समाचार 2936
नायक किशोर खतिवडालाई आफ्नो श्रीमान दा’वी गरेकी महिला र किशोर आ’मने सामने भएका छन् । चलचित्र रावण मार्फत नेपाली रजत’पटमा प्रवेश गरेका कलाकार किशोर खतिवडा माथि एक महिलाले श्रीमान दावी गर्दै अहिले धो’ का दिएको बता’एकी छन् । उनले मिडियामा सो कुरा सार्वजनि’क गरेपछि किशोर पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
कलाकार खतिवडाले बिगत ३ वर्षदेखि बिवाहको आ’श्वासन दिएर आफुलाई प्रयोग गरेर लाखौं रकम समेत लगेको आ’रोप लक्ष्मी गदालले लगाएकी छन् । तीन वर्ष सम्म श्रीमान श्रीमतीजस्तै बसेका उनीहरुबीच सम्बन्धमा स’मस्या आएको छ । भोजपुर घर बताउने लक्ष्मी गदालले खतिवडालाई श्रीमान दा’वी गर्दै आफुलाई अन्या’य गरेको आरो’प लगाएकी हुन् ।
उनले यस्तो आ’रोप लर्गापछि खण्डन गर्न उनी पनि मिडियामा सार्वजनिक भएका हुन् । गदालका अनुसार नयाँ बानेश्वरको एक जिम हलमा जाँदा खतिवडासँग उनको भेट भएको बताएकी छन् । खतिवडाले आफैं बोलाएको र मोबाइल नम्बर मा’गेपछि दिएको उनले बताइन् । त्यस पछि उनले विभिन्न बहा’नामा पैसा माग्न लागे । उनले देशको एउटा चिनिएको कलाकार देलान् नि त भनेर आफुले दिइ’रहेको बताइन् । यही बिषय लाई लिएर कलाकार सबिता भट्टराईले आफ्नो बि’चार राखेकी छिन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ह’त्या गर्ने धम्की !
June 12, 2021 admin समाचार 2223
नेपाली कांग्रेसका बाग्मती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ह’त्या गर्न आफू तयार रहेको ब’ताएका छन् । बाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्य’क्रममाथि छलफल क्रममा शुक्रबार भाग लिँदै कांग्रेस सांसद वैद्यले ओलीको
November 8, 2020 admin समाचार 7046
आँखा नदेख्ने आमा बुवा पाल्न रत्नपार्कमा गीत गाउने ५ बर्षे बाबुको हुने भयो गीत रेकर्ड(भिडियो हेर्नुहोस्)
December 23, 2020 admin समाचार 5649
आँखा नदेख्ने आमा बुवा पा’ल्न रत्नपार्कमा गीत गाउने ५ बर्षे बाबुको गीत रेक’र्ड हुने भयो । परिवारले नै गीत गाउँदै, शिशिर भण्डारीले गीत रेकर्ड गराईदिदै । रत्नपार्कको व्यस्त सड’कमा हिड्दै गर्दा मेरो आंखा एक मनै